विवाहपछि धेरै युवतीले गुनासो गरे « Mero LifeStyle
विवाहपछि धेरै युवतीले गुनासो गरे
नेपाल आइडलको पहिलो सिजनमा फस्ट रनरअप भएका गायक निशान भट्टराईले गत लकडाउनमा कानूनी विवाह गरे । उनले ऋचा न्यौपानेसँग काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला अदालतमा विवाह गरेका हुन् । गत लकडाउनमा विवाह गरेका भट्टराईसँग मेरोलाइफस्टाइलले गरेको विवाह वार्ताः
लकडाउनमा कानूनी विवाह गर्नुभयो, कस्तो अनुभव भइरहरेको छ ?
विवाह गरेको र नगरेको कुनै फरक छैन, समान्य नै छ । नचिनेका वा नयाँ मान्छेसँग विवाह भएको भए चिन्न समय लाग्थ्यो होला । त्यसैले नयाँ अनुभव खासै छैन ।
धुमधामसँग विवाह गर्ने योजना छ, कि छैन ?
धुमधाम विवाह गर्ने योजना पनि छ । अहिले नै भन्न मिल्दैन । ६ महिना वा ६ वर्ष पनि लाग्न सक्छ । वैवाहिक वर्षको उत्सवमा विवाहलाई सेलिव्रेशन मात्र गर्न पनि सकिन्छ ।
कानूनी विवाह नै किन रोज्नुभयो ?
कानूनी विवाह रोज्नु मेरो धारणा होइन । विवाह हुने समयमा लकडाउन भयो । त्यो बेला धुमधाम विवाह गर्ने वातावरण थिएन र यही विवाह नै सहज भएका कारण र समय परिस्थितीलाई मध्यनजर गरेर कानूनी विवाह रोजेँ ।
विवाहपछि श्रीमतीलाई जन्मघर लानुभयो कि छैन ?
विवाहपछि धेरैपटक लगिसकेँ । जन्मघर लागेर परिवारसँग भेटघाट र चिनजान गराईसकेको छु ।साथै विवाह पश्चात् गरिने परिवारको रीतिरिवाज सबै पूरा गरिसकेँ ।
विवाहपछि पहिलो पटक कहाँ घुम्न जानुभयो ?
विवाहपछि पहिलो पटक पोखरा घुम्न गएका थियौँ । यो अवधिमा काठमाडौँ वरिपरिका विभिन्न रमणीय ठाउँहरु घुमिसक्यौं ।
विवाहित र अविवाहितमा के फरक पाउनु भयो ?
विवाह पश्चात् मेरो जिम्मेवारी बढेको छ । विवाहअघि एक्लो हुँदा जीवन अव्यवस्थित थियो भने जीवन संगिनीको आगमनपछि व्यवस्थित भएको छ ।
प्रेमिकाको रुपमा हुँदा र श्रीमतीको रुपमा पाउँदा कस्तो फरक हुँदो रहेछ ?
मेरो प्रेमिका र श्रीमती उनी नै हुन् । प्रेमिकाका हुँदा उनी मसँग बुझ्ने साथीको रुपमा मात्र जोडिएकी थिइन् भने विवाह पश्चात् उनी मेरो जीवनको दु:ख, सुखको सहयात्रीको रुपमा जोडिएकी छिन्, त्यही नै हो फरक ।
विवाहपछि तपाईका युवती फ्यानहरु भड्के होलान् है ?
विवाहपछि मलाई चाहने र मसँगै जीवन बिताउने फ्यानहरुको मन दुखेको होला । छोरी मान्छेको कोही न कोही ड्रिमवाइज हुन्छ र म पनि कसैको थिएँ होला । तर, यी कुराले मेरो कलालाई नै नकारेर र अस्वीकार गरेर बस्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन ।
युवतीहरुबाट कुनै गुनासो आएन ?
एकदमै धेरै गुनासो आए, त्यो मैले भन्नै सक्दिन । यस्तोसम्म भन्नुभयो कि ‘म तापाईकै हुन चाहन्थेँ, विवाह होस् त तपाईसँगै होस् भन्ने थियो, तपाईलाई सर्वस्व ठान्थेँ, तर आज तपाई अरु कसैको हुनुभयो । मेरो एउटा सपना मात्र पूरा हुनसकेन भनेर सम्झिन्छु तर म तपाईको स्वर र व्यक्तित्वको सधैँ फ्यान हो ।’ यसरी मनको कुरा भन्नुभएको छ ।
ससुराली कति पटक जानु भयो ?
ससुराली कति पटक गएको हो भनेर गिन्ती गरेको छैन, जे होस् धेरैपटक गएको छु । मेरो ससुराली मेरो दोस्रो घर हो । अहिले कार्यक्रमहरु पनि छैन, त्यसैले समय पाएको छु । समय–समय गइराखेको हुन्छु ।
अघिल्लो लकडाउनमा विवाह गर्नुभयो, अहिले निषेधाज्ञामा के योजना छ ?
सरकारले दिएको आदेश पालना गरे घरमै बसी आाफूलाई सुरक्षित राख्ने नै अहिलेको योजना हो । २०२० को भन्दा अहिलेको नसोचेको तरिकाले अप्ठ्यारो र गाह्रो भएको छ । यतिबेला सबैभन्दा राम्रो योजना आफूलाई सुरक्षित राख्नु हो ।